सेरोफेरो : घान्द्रुक गाउँ : हिमाल मुनी हिमादिदीको होमस्टे
२. स्वागत द्वारमा राखिएका सूचना अनुसार घान्द्रुकमा ५० देखि ५५ वटा धेरै तहका होटलहरू छन्, महंगो देखि सस्तोसम्म । तपाईको बजेट र चाहना अनुसार सेवा सुविधा लिन सक्नुहुनेछ । मुख्य बजारबाट १० मिनेटको उचाई तिर लाग्यो भने तपाईले गुरुङ होमस्टे पनि भेट्न सक्नुहुनेछ । होमस्टे अन्य होटलमा भन्दा केही सस्तो हुन्छ । साथै तपाईे त्यहाँ घरेलु वातावरणमा गाउँबारे बुझ्न र रमाइलो लिन सक्नुहुनेछ । होमस्टेको राम्रो पक्ष भनेको तपाइले खर्च गरेको पैसाले सोझै कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न मद्दत गर्नेछ ।
३. केहि साता अघि हामी ५ जना साथीहरू (सुरेश, होमनाथ,टिकाराम, जय र म ) यात्राको क्रममा घान्द्रुक ३ कोटगाउँमा रहेको सुपर भ्यु होमस्टेमा पुगेका थियौं । प्रेम बहादुर र हिमा गुरुङको यो होमस्टेमा २० देखि २५ जनासम्म अट्न सकिँदो रहेछ । महिला र पुरुषको निम्ति छुट्टाछुट्टै कोठाको व्यवस्था समेत छ । सुतेको बेड चार्ज १ सय, सादा खानाको ३ सय, चियाको ३० रुपैयाँ लाग्छ । बिहानीको घरेलु खाजा खाना तपाईकै इच्छा अनुसार तयार हुन्छ । भैसीको घिउ दलेको सुख्खा रोटी प्रत्येकको ३० रुपैँया, तरकारी एक प्लेटको ३० रुपैयाँ । लोकल कुखुरा खानुहुन्छ भने तपाईले अर्डर गरेर पकाएको समेत गरि २ हजार देखि ३ हजारसम्मका कुखुराहरू घरमै रोजेर काट्न लगाउन सक्नुहुनेछ । तपाईको अर्डर अनुसार ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि बजारमा किनेर पकाइदिनेछन् । तपाईलाई लोकल रक्सी चाख्न मन छ भने प्रति गिलास ३० रुपैयाँको दरमा पाउनु हुनेछ । बियर, वाइन, हार्डड्रिंक्स खान मन भए मुख्य बजारबाट किन्नु पर्ने हुन्छ । ती बजार भाउ भन्दा केही महंगो पर्न जान्छ । बियरमा प्रति बोतल एक देखि डेढसय फरक पर्छ । किम्चेबाटै खच्चडमा बोकाएर लैजानु पर्ने भएकाले खाने र पिउने कुराको भाउ केही बढी छ । यदि गाडीमा जाने भए तपाईले पोखराबाटै पेय पदार्थ झोलामा बोकेर पनि लैजान सक्नुहुनेछ । खानामा लोकल साग, बारीकै तरकारी, गुन्द्रुक भट्टको अचार, घरकै चामलको मज्जा लिन सक्नुहुनेछ । घर भित्र वा बाहिर साँझ दाउरा बालेर साथीभाई आगो ताप्दै कुराकानी र खानपानमा मस्त हुन पनि सक्नुहुनेछ । गुरुङ बुढाबुढीको ठट्टाले तपाईको समुहमा अझ रमाइलो थप्नेछ । विहान सबेरै उठ्नु भयो भने घरको आँगनबाट माछापुच्छ्रे, अन्नपुर्ण हिमालका श्रृंखला आकाश खुलेको दिनमा मज्जैले देख्न सक्नुहुनेछ । विहानी पख चियानास्ता पछि गाउँ घुम्ने मज्जा लिन नभुल्नु होला ।
(हिमा/ प्रेम गुरुङ, ९८२५१०४७६८/९८४६३२४७२६)
गाडी चल्न थालेपछि गाउँमा चहलपहल त बढेको छ तर यसले अर्को दुःखको पाटो पनि जन्माएको छ । किम्चेसम्मै गाडी चल्न सुरु गरेपछि पैदल यात्रामा पर्ने बीचका बस्तीको व्यापार स्वाट्टै ओरालो लागेको छ । पैदल मार्गका धेरै होटलहरू सुनसान भएका छन् भने केही पुर्ण बन्द छन् । सुभरभ्यु गेष्ट हाउस संचालन गर्ने एक महिलाका अनुसार ७५ प्रतिशत व्यापार घटेको छ ।
हुन त दुख बिमार पर्दा, दुर्घटना तथा गर्भवती अवस्थामा चाँडो भन्दा चाँडो अस्पताल पु¥याउनको निम्ति बाटोले धेरै सुविधा दिएकोछ । पुर्वाधार विकासको सुखद पाटो यो भएपनि दुखद पाटो भने यसले पैदल मार्गका व्यवसायलाई पुरै सुकाइदिएको छ । मार्गमा पर्ने केही होटलहरू भग्नावशेष मै परिणत भएको देख्न सकिन्छ । यद्यपी जम्मा ५ घण्टाको पद यात्रामा मात्र गाडी चल्ने हुनाले हिडेरै यात्रा गर्ने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको संख्या पनि उलेख्य भेटिन्छ । केही पर्यटक जाँदा गाडीमा र आउँदा हिडेर यात्रा गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गरौं
लेखक : भवसागर घिमिरे